Shaqaalaynta - Dugsiyada Dadweynaha Stillwater Aagga ISD 834
Waxaan isbeddel ku sameyneynaa nolosha carruurta! Daryeel inaad nagu soo biirto?
Caawinta ardayda inay waxbartaan oo ay koraan waa shaqo weyn, waxayna ubaahantahay boqolaal shaqaale heersare ah iyo daryeel si ay udhacdo. Waan ku faraxsanahay shaqaalaheena cajiibka ah ee ku shaqeeya magaca ardayda 8,300 maalin kasta. Doorarkeennu way kala duwanaan karaan, laakiin hal shay ayaa isku mid ah - hamigeenna la wadaago ee aan saameyn macno leh ugu yeelan karno nolosha ardayda ka tirsan bulshada aan jecel nahay. Waa sababta ay dadku ugu soo biiraan kooxdayada waana sababta ay halkan u sii joogaan.
Eeg / Dalbo
DHAMMAAN Jagooyinka Furan
Eeg / Codso Meelaha Gudaha
Wadayaasha Basaska Iskuulka
Xulo Biyaha Wabiga
Samee xirfaddaada isbedel!
Shaqaalaheena 1,000 ayaa wada shaqeeya maalin kasta si loo hubiyo in ardaydeena ay helaan jawi waxbarasho oo amaan iyo soo dhaweyn leh, iyo sidoo kale la falgal xirfadlayaal iyaga daneeya. In kasta oo ardaydu ay yihiin ahmiyadeena koowaad, waxaan sidoo kale naga go'an inaan midba midka kale daryeelo Waxaan kawada shaqeynaa midba midka kale koox ahaan, qof kasta oo keenaya xirfado iyo karti u gaar ah oo u gaar ah si uu gacan uga geysto guusha guud ee degmadeena. Dhamaanteen waxaan nahay Ponies. Oo kulligeenna annagoo isku duubna ayaan degmadan ka dhigaynaa mid weyn.
Ku soo dhowow bulsho iyo nidaam dugsi oo ku dhisan dhaqan adag oo heer sare ah!
Waxaan u heellan nahay ardaydeena iyo shaqaalaheena
Sinaan: Balanqaadkeena sinaanta micnaheedu waa in dhamaan ardayda ay heli doonaan ilaha iyo taageerada ay u baahan yihiin si loogu guuleysto.
Xiriirka: Waxaan marwalba ka hormarinaa baahiyaha ardaydeena waxaana naga go'an inaan dhisno xiriiro adag ardaydayada.
Taageerada Ardayda: Waxaa naga go'an inaan taageerno fayoobaanta bulshada / shucuurta iyo caafimaadka maskaxda ee ardaydeena.
Tacliinta Tacliinta: Waxaan aaminsanahay in macallimiin heer sare ah iyo waxbarid tayo leh ay muhiim u yihiin guusha ardayga.
Ka Qeybgalka Qoyska : Waxaa naga go'an inaan la shaqeyno qoysaska si aan ula kulanno baahida shaqsiyadeed ee ardaydeena.
Ardaydeenu maahan kuwa kaliya ee maalin walba wax barta. Waxaan dib u qeexineynaa waxa ay ka dhigan tahay in aan leenahay xirfad kobcinaysa ee waxbarista. Waxaa naga go'an inaan u fidino shaqaalaheena waxbarista fursado koritaan xirfadeed iyo horumar, kuna shaqeynaya qaab wada shaqeyn iyo kalsooni. Natiijada ugu weyn ee barnaamijkeena Horumarinta Macalimiinta iyo Qiimeynta (TDEP) ayaa ah wanaajinta barashada ardayda iyadoo loo marayo dhaqamada baraha ee la xoojiyay.
Isbadal u samee ardaydeena
Xubin kasta oo kooxda ka mid ah wuxuu fursad u leeyahay inuu saameyn macno leh ku yeesho nolosha ardayda. Laga soo bilaabo cunto kariyeyaasha ilaa farsamayaqaannada mushaharka, laga bilaabo xirfadleyaasha illaa shaqaalaha iyo inbadan, waxaa jira siyaabo aan la tirin karin oo looga faa'iideysto xirfadahaaga gaarka ah isla markaana loo kobciyo xirfaddaada - dhammaantood iyadoo isbeddel dhab ah laga sameynayo carruurteenna, dugsiyadeenna iyo jaaliyadeenna.
Fursadaha taageerada waxaa ka mid ah:
Martida Martida / Bedelka
La-taliyeyaasha Dugsiga / U-doodaha Ardayda / Cilmi-nafsiga dugsiga
Dhakhaatiirta Jirka / Shaqada iyo Hadalka
Shaqaalaha Adeegyada Cuntada
Shaqaalaha Xafiiska iyo Taageerada
Shaqaalaha Adeegyada Dhexe
Shaqaalaha Daryeelka Da'da Dugsiga
Minnesota Akhriska & Xisaabta
Naga caawi inaan ardayga ka dhigno mid amaan ah adoo dhameystiraya baaritaanka taariikhdaada.
Baro wax badan oo ku saabsan faa'iidooyinka badan ee la siiyay shaqaalaheena.
Baro sababta aagga Stillwater uu yahay meesha ugu fiican ee laga shaqeeyo, lagu noolaado laguna barto!